Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu) #0; Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu) #1409
Izimfihlakalo Zezulu #1409
1409. Ukuthi izenzeko zomlando njengoba zichaziwe ziyafanekisa, kodwa onke amagama achazayo amamuthe incazelo kamoya kubasobala ngosekuphawuliwe kwabuye kwakhonjiswa malungana nezifanekiso nangezinto ezimumethe incazelo kamoya ezinombolweni 665, 920, 1361 Kodwa njengoba izifanekiso ziqala lapha, ilungile enye incazelo efuphi ngalokhu. ISonto laseMandulondulo, elaliyiSonto lezulu lamazulu, lalithatha zonke izinto zemvelo, zomhlaba, nezomzimba, okwakuvele kuyizinto ezazaziwa ngesu lezinzwa zabantu balo, njengezinto ezingelutho olunye ngaphandle kwezinto ezifileyo. Kodwa ngesizathu sokuthi zonke izinto emhlabeni ziveza umqondo othile wombuso weNkosi, nakanjalo ziveza umqondo othile wezinto zezulu lamazulu nezezulu likamoya, ngakhoke abantu baleloSonto babengacabangi ngalezozinto ababezibona phambi kwabo noma bezazi ngesu lezinzwa, kepha babecabanga ngezinto zezulu lamazulu nangezinto zezulu likamoya. Empeleni babengacabangi ngokusukela kulezozinto kepha babecabanga ngesu lazo. Ngalendlela izinto ezazifile kubo zazivuka ziphile.
 Lezozinto ezazigodle noma zimumethe incazelo kamoya zaziqoqwe yizizukulwane zabantu baleloSonto ezindebeni zabo mathupha, maqede izizukulwane zaguqula lezozinto zaba yizimfundiso ezaba yiZwi leSonto laseMandulo ngemuva kukaZamcolo. Lezizimfundiso eSontweni laseMandulo kwakuyizinto ezimumethe incazelo kamoya, ngokuba ngazo bafunda izinto zangaphakathi, nangokusukela kuzo babecabanga ngezinto zikamoya nangezinto zezulu lamazulu. Kepha lapho lezizimfundiso seziqala ukushabalala, nalapho abantu beSonto laseMandulo bengasazazi izinto zangaphakathi ezifundiswayo, baqala ukuthatha zona lezizinto zemvelo nezomhlaba ezinencazelo kamoya njengezinto ezingcwele, bazikhonza, bengasenawo nomncane umcabango wokuthi ziyafanekisa, lezozinto zemvelo nomhlaba zaqala ukuba yizifanekiso. Ngalokhu kwavumbuka iSonto elifanekisayo elaqala ngoAbrama nangemuva kwakhe lasungulwa ezizukulwaneni zikaJakobe. Ngokusukela kulokhu, makwaziwe ukuthi izifanekiso zasuka zavumbuka ezintweni ezazimumethe incazelo kamoya eSontweni laseMandulo, nokuthi lezozinto ezazimumethe incazelo kamoya zazisuka emiqondweni yezulu lamazulu yeSonto laseMandulondulo.
 Ukuthi izifanekiso zinjani kubasobala ngezingxenye zeZwi eziwumlando, lapho zonke izenzo zalabokhokho, okungukuthi, izenzo zikaAbrama, zikaIsaka, nezikaJakobe, nakamuva zikaMose, zabAhluleli, nezamakhosi akwaJuda nawakwaIsrayeli, zingelutho olunye ngaphandle kwezifanekiso. Nanjengoba sekuke kwaphawulwa ngenhla, eZwini ngo“Abrama” kufanekiswa iNkosi, nangoba ufanekisa iNkosi, ngakho-ke ufanekisa umuntu wezulu lamazulu. No“Isaka” ufanekisa iNkosi, nangalokho ufanekisa umuntu kamoya, kanti no“Jakobe” ufanekisa iNkosi, nangalokho ufanekisa umuntu wemvelo ohambisana noma ofanelene nomuntu kamoya.
 Kodwa ubunjalo bezifanekiso buwukuba isimilo somuntu ofanekisayo singakhankanywa noma singabhekwa, kubhekwe kuphela lokho akufanekisayo. Ngokuba onke amakhosi akwaJuda nakwaIsrayeli, noma ngabe isimilo sawo sasinjani, ayefanekisa uBukhosi beNkosi, nabobonke abaphristi, noma ngabe babenhloboni yabantu, babefanekisa uBuphristi baYo. Kanjalo abantu ababi nabantu abalungileyo babekwazi ukufanekisa iNkosi, nezinto zezulu lamazulu nezezulu likamoya zombuso waYo, ngokuba, njengoba sekuphawuliwe kwabuye kwakhonjiswa, izifanekiso zazingahlanganise lutho noma zahluke geqe kumuntu ofanekisayo. Ngakho-ke yonke imilando eseZwini iyafanekisa, nanjengoba lokhu kuyiqiniso, kuyalandela ukuthi amagama aseZwini ayaqhamisa noma amumethe incazelo kamoya, okungukuthi, asho okwahlukile engqondweni engaphakathi kokushiwo engqondweni yemvelo noma engaphandle.
Izimfihlakalo Zezulu 1885, 3349, 3394, 3686, 3702, 3727, 4442